Ikhosityum yedayinaso, Nwabisa Park Ulokhwela - Ocean Art
(Emva koku obizwa ngokuba Ocean Art), yasungulwa ngo-2009, nto leyo ibekwe High-zobugcisa Industrial Park, uZigong City, kwiPhondo Sichuan, kwaye oko yinto ishishini ehlanganisiweyo yenzululwazi kunye nobuchwepheshe nto leyo ngugqirha kuyilo & uphuhliso, ukwenziwa, ukuthengiswa, kwaye imiboniso yeemveliso Ukulinganisa. Ocean Art ugxininise kuphando nokuphuhliswa iidayinaso animatronic, izilwanyana Ukulinganisa nezinambuzane, idayinaso amatye kunye zamathambo, izityalo yamandulo ngumntu, wangcwatywa intsimi kwakusembiwa kuyo, ubume omncinane kunye nokuhamba ingubo idayinaso kunye nezinye iimveliso Ukulinganisa.
Ukuba unemibuzo malunga iimveliso zethu okanye uluhlu lwamaxabiso, qhagamshelana nje nathi! yombuzo
uluhlu Case ukubonisa
ubumnyama ayikwazi ukuba isizathu sokuba bayeke abantwana ukuba zihambele ipaka idayinaso umxholo, yaye le meko bungqina ilungileyo.
Iinkwenkwezi Dinosaur yokuqala emashumi mathandathu anamithandathu Chinese e Haitang Bay idayinaso nepaki undoqo yidayinaso yophando e China. Bonke zixhonyiwe indlela 1: 1 imodeli yokuqala enkulu. Ezi ntlobo amathandathu anesithandathu yidayinaso animatronic leyo maded sithi epakini kwamanye amalwimi ezifakiweyo. Ezi Dinosaurs zenziwa of skeleton zentsimbi kunye dust gel komhlaba. Ziphucule umzimba kwaye wenze umsindo, kunye Ukulinganisa eliphezulu kakhulu.
2016 Summer.Everyone uthanda ukubona iidayinaso epakini umxholo kuba iya kuzisa uchulumanco ngaphezulu. Ingakumbi abantwana, ukuba uphambene malunga Dinosaurs animatronic. Njengangoku, uninzi parks isihloko kufuneka animatronics ezahlukeneyo izilwanyana kunye neemodeli, ngokukodwa iidayinaso ukuba zinceda umdla ngakumbi visitors.And le paki idayinaso Russian yeyona umzekelo obalaseleyo.
Okuninzi Products Best-bethengisa